Belgium neFrance: Hondo Yenyika Yekutanga ichaunza vashanyi veIndia
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Belgium neFrance: Hondo Yenyika Yekutanga ichaunza vashanyi veIndia
Kunze kwemhemberero dzepamutemo, akateedzana emitambo uye zviitiko zviri kurongwa muIndia neFrance. Mamiziyamu akagadziridzwa nezvinhu zvitsva uye zvinyorwa zvakaratidzwa.
Kunze kwemhemberero dzepamutemo, akateedzana emitambo uye zviitiko zviri kurongwa muIndia neFrance. Mamiziyamu akagadziridzwa nezvinhu zvitsva uye zvinyorwa zvakaratidzwa. Iyo 2014 edition yeTour de France ichapfuura munzvimbo dzinoverengeka dzakarwiwa hondo, semucherechedzo wekukudza.
“Tiri kutarisira vangangoita mamirioni maviri vaenzi vanowedzera kunzvimbo nenzvimbo dzechivanhu mukurangarira Hondo Huru mumakore anotevera kubva kumativi ese epasi. Isu tinotarisira kugamuchira nhamba huru yevaenzi kubva kuIndia yekurangarira Hondo Yenyika-I muFlanders neBrussels. Mauto eIndia akaita basa rakakura panguva yeHondo Yenyika-I. Vanosvika zviuru makumi manomwe nezviviri vakarwa muFlanders senhengo dzemauto eBritish (Indian Army Corps) uye zviuru zvinomwe vavo vakarasikirwa neupenyu, ”akadaro Sunil Puri, maneja maneja, Shanyira Flanders, kuIndia.
Shanyira Flanders ndiyo hofisi yekushanya yeFlanders dunhu reBelgium. Munguva pfupi yadarika yakaronga musangano wekushanyirwa paGreat War Centenary inotarisa mukusimudzira kuzivikanwa kwekushambadzira kweIndia nezvezviitiko zviri kurongwa kubva muna2014-2018 paChirangaridzo cheHondo Yenyika-mudunhu iri.
Munguva pfupi yadarika yakaronga musangano wekushanyirwa paGreat War Centenary inotarisa mukusimudzira kuzivikanwa kwekushambadzira kwevekuIndia pane zviitiko zviri kurongwa kubva muna2014- 2018 paChirangaridzo cheHondo Yenyika I mudunhu iri.
Boeing Machinists mubatanidzwa kuvhota zvakare pachibvumirano cheBoeing 777X
Vashanyi havagamuchire muUganda: Hupenyu mutirongo yeungochani uye Anti Mini Skirt Bhiri yevakarurama